शब्दकोश: जसले हान्यो, त्यसले जान्यो
शुक्रबारे बिदाको दिन, कहिले साथीहरूसँग जोसिएर त कहिले एक्लै टहलिन मन पर्छ । सधैँ हतारमा बग्नुपर्ने टेलिभिजनको कामबाट यसो छेउ लाग्दै हप्‍ते बिदा मनाउँदा आफूलाई पूरै सुस्त बनाउन मन लाग्छ, स्क्रु ढिला भएको मेसिन जस्तै ।
अन्य पेसा-व्यवसायको मान्छेलाई पनि त्यस्तै हुँदो हो । बिदाबाट ताजगी बटुल्दै आफूलाई रिचार्ज गरी फेरि पुरानै कामकाजी रफ्तारमा फर्किनुपर्ने नियति । फेरि मनाउन पनि हामी नेपालीले मनाउने बिदाको खाकाअन्तर्गत कति नै पो फराकिलो सुविस्ता हुन्छ र ? जे कुरामा पनि आर्थिक सीमाले ‘भिलेन’को काम गर्छ । तर हाम्रो मनकारी स्वभाव जाती छ, बिदाको दिन साथीभाइ र घरपरिवारको साथमा बस्न पाएकै खुसीमा हामी चङ्गा बन्छौँ ।
यस्तै मेसोमा कोठामा चिया समेत नखाई जनवरी ७ को शुक्रबारे बिहान निस्केको थिएँ सडक सफरमा । नक्साल-हात्तीसार-कमलपोखरीको नियमित रुट पछ्याउँदै पुतलीसडकबाट बागबजारको मोड समातेँ । रत्‍नपार्क अगाडिको शान्ति वाटिकामा पुग्दा गणेशमानको सालिक पछिल्तिर रानीपोखरीको किनार छेउमा मान्छेहरूको गुरुम्म हुल देखेँ । पचहत्तरै जिल्लाका थरीथरीका मान्छेहरू भेटिने भनेर रत्‍नपार्क क्षेत्रलाई चिनिन्छ । कस्ता मान्छे कुन नियतले वा कस्तो सद्‌भावले ओहोरदोहोर गर्छन्, अनुमानसम्म गर्न गाह्रो पर्छ । उसै त सहरी परिवेश, कसैलाई भर र पत्यार गर्न नसकिने माहौल मानिन्छ, त्यसमाथि विरानो मान्छेका लागि पनि चिनो लगाउने जस्तो साझा ठेगाना बनेको र राजधानीको सवारी आवागमनको मियो ठाउँ - खुला र अस्तव्यस्त रत्‍नपार्क क्षेत्र । त्यस्तो ठाउँमा बिनसित्ति कसैले केही फतफताए पनि छिनमै मान्छेहरू गोलबद्ध भएर कुनै भाग छोप्न झैँ जम्मा भइहाल्छन् ।
त्यही पनि फुर्सदको दिन यत्तिकै बरालिन निस्किएको म के रहेछ त्यो हुलमा भनेर उतै मिसिन गएँ । देखेँ – दुवै हात कक्रक्क परेको अवस्थामा रहेको २२-२४ वर्षको नौजवानको शव । एकाबिहानै यस्तो दृश्य देख्दा भाउन्न भयो । मन अमिलिइरह्‍यो । को हो, के भएर मरेको हो केही पत्तो छैन । छेउमा दुई जना प्रहरी थिए, उनीहरू पनि असमञ्जस अवस्थामा थिए । शव रहेको ठाउँदेखि थोरै पर युवा बाहुल्य रहेको भीड त्यो युवाको मृत्युको सन्दर्भमा सहरी क्षेत्रको (अ)सुरक्षा स्थिति र व्यक्तिगत रूपमा अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे चर्चा गर्न थालेको थियो । एक प्रहरी जवान पनि भीडको आडैमा उभिएर राज्यको बेकम्मा सुरक्षा व्यवस्थाबारे भीडमा सहभागीहरूले उडाएको खिल्लीको साक्षी बन्दै मुस्कुराइरहेको थिए । तर उनले नाकमा लगाएको मास्कले गर्दा त्यो मुस्कान खुलेर प्रकट हुन सकिरहेको थिएन ।
दुर्बल संयन्त्र र अपराधी संरक्षणको संस्कार भएपछि तमासे नभई के गर्ने !
यी उभिएर हेरिरहेका साम्बाहाम्फे थरका प्रहरी अधिकारीलाई ती युवक के भएर मरेका रहेछन् भनेर जिज्ञासा राखेँ मैले । “पिटिएर मरेको हो ?”, बुझ्न खोजेँ ।
“काँ हुनु, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मरेको हो”, निश्चिन्त भएर सुनाए तिनले । हुन पनि एउटा हात बटारिएर कुमसम्म पुगेको र अर्को हात खुम्चिएर अघिल्तिर आएको थियो । तर ज्याकेट र पाइन्ट लगाएको अवस्थामा र राजधानीको अरू ठाउँमा ओतिएर बस्न मिल्ने सुविधा हुदाहुँदै ऊ खुला आकाशमुनि पछारिन किन आयो होला ? जाडोले नै कठ्याङ्ग्रिएर मरेको हो भन्ने सत्य हो भने पनि त्यो कल्पना गर्दा मात्रै पनि आङ सिरिङ्ग भयो । यस्तै हो यहाँ वर्गीय भिन्नता – कोही भोको पेटमा मर्छन्, कोही धेर खाएर पेट ढाडिएर !
“आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने हो भने आफ्नो खैरात छ, नत्र छैन ।” एउटा बोल्यो ।
समर्थनमा गुञ्जन सुनियो युवाहरूको ।
प्रहरी र राज्यको सुरक्षा संयन्त्र उनीहरूका लागि ठट्टा बनेको थियो । राजधानीका सुनसान खालका एक-दुईवटा ठाउँको नाम लिएर उनीहरूले ती ठाउँमा एक्लैदुक्लै र रात-बिरात नहिँड्नुमै आफ्नो कल्याण हुने निष्‍कर्षमा पुग्दै थिए सबै । यसैगरी सहरमा सबैजना आ-आफ्नै सुरमा रहेकाले एउटाको वास्ता र फिक्री अर्कोले नगर्ने अरूलाई जेसुकै परे पनि मूकदर्शकमा सीमित हुने चलनबारे चर्चामा बत्तिंदै थिए सबै । मृतक युवाको अनुहार हेर्दा पिटाइबाट मरेको जस्तो हलुका रक्ताम्य थियो । त्यो युवा पिटिएर मरेको हो कि भने गाइँगुइँका बीच यहाँ जसले जसलाई पिटे पनि, पिटपाट गरेर कतै गयो भने गको गयै हुने, कुनै कारबाही र सोधखोज कतैबाट नहुने व्यङ्ग्य पनि आयो । जुन व्यावहारिक रूपमा तीतो यथार्थ पनि बनिआएकै छ ।
”यहाँ त जसले हान्यो त्यसले जान्यो भन्ने अवस्था छ ”,
समाजमा बदमासहरूको बोलवाला रहेको र त्यो बदमासीमा राज्यको प्रशासनले पनि आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गर्ने जस्तो प्रवृत्तिप्रति लक्षित गर्दै बोले अर्का ।
हामी पनि रमिते ! : सहयोगी होइन दर्शक बन्ने सहरिया प्रचलन
दुई जना सडकमा जुधिरहेको छ भने पनि यहाँ त छुट्याउने कोही हुन्नन्, छेउमा उभिएर भिडेको हेर्नेको लाइन पो लाग्छ भन्ने टिप्पणी गर्‍यो पछाडि झोला भिरेको अलि टाठो युवकले । हुन पनि हो, बरू गाउँतिर छुट्याउँछन् जुधिरहेका दुवै पक्षलाई समाएर । सहरतिर त छुट्याउन पनि मान्छेहरू कसरी अगाडि सरून्, जुधिरहेका मान्छे को कस्ता छन्, कतिसम्ममा खतरनाक हुन सक्छन् ती र के निहुँमा भिडेका हुन् भन्ने खुट्याउन पनि सकिन्न । यसकारण उनीहरू चुपचाप आफ्नो बाटो लाग्छन्, या त रमिते बन्छन् । यही सहरमा छु आफू पनि । आफू पनि दर्शकहरूमै परिणत हुँदै गए जस्तो लाग्दैछ ।
शव वाहनमा हाल्न मृतकलाई लैजाँदै प्रहरी
खासमा त्यो बिहान मृत्यु जत्तिकै चिसो थियो । त्यही बोध गर्दै थिएँ फर्किँदा ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, January 10, 2011
Labels: देश-वासी, समाज
दिनेश राज January 10, 2011
मन साह्रै कुँडियो । हामी रमिते भन्दा अरु केहि बन्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन यहि कुरा मनमा खेलिरहेको छ ।
S January 10, 2011
Its so sad :( ....
Death is inevitable...however I feel that one should dieaheroic death...people die like cats and dogs in the street...and it pains as well. Well the above post pained me as well. But dying this way seems pathetic :(
रुपेश January 10, 2011
सलाईको काँटीजस्तै ओस्सियो मन ।
दीपक जडित January 10, 2011
'खासमा त्यो बिहान मृत्यु जत्तिकै चिसो थियो । त्यही बोध गर्दै थिएँ फर्किँदा ।'
OMG! भाउन्न छुटाउने कुरा ।
पहिलो तस्वीर र ब्लगको उठान अनि टाइटल हेर्दा कुनै हँसमुख स्वभावको अ/परिचित युवक न्यानो घाममा उत्तानो पल्टेर आनन्द मनाईरहेको रहेछ भन्ने लख काटेको थिएँ ।
RRijal January 16, 2011
कति सस्तो जीवन ?
आजाद अजनवी January 19, 2011
संबेदना भन्ने चिज नै हराइसक्यो साला यी शहरहरुमा ।